“မမူးလောက်ပါဘူးနော်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “မမူးလောက်ပါဘူးနော်´´
Posted by ခင်ခ on Aug 1, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 18 comments
နေရာကိုပြောရရင်တော့ အရက်၊ ဘီယာ နှင့် အကင်စုံရောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်အပြင်ဘက် မြေကွက်လပ်မှာ ခင်းထားတဲ့စားပွဲက တစ်ယောက်သည် အတွင်းမှာထိုင်ပြီး လူနှစ်ယောက် စားသောက်နေတဲ့ စားပွဲတစ်ခုထံကို လျှောက်သွားပြီးအနီးနားရောက်တော့ ရပ်လိုက်ကာ
“ဟေ့ကောင့် မင်း ဘာဝင်ပြောသွားတာလဲ အဲဒီကိစ္စ ငါ မင်းကို ရှင်းမယ်´´
အဲဒီမှာဘဲ ခုနထိုင်နေတဲ့ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကထရပ်လိုက်ပြီး
“နောင်ကြီး လာထိုင်ပါအုံး အေးဆေးထိုင်ပြီးပြောကြတာပေါ့´´ လို့ဆိုကာ ထိုင်ဖို့ခုံတစ်လုံးကို အလိုက်သင့် နေရာချပေးလိုက်တော့ ခုနပြောနေတဲ့ သူက ၀င်ထိုင်လိုက်တယ် အဲဒီမှာဘဲ ခုနထိုင်ခိုင်းတဲ့ သူကဆက်ပြီး
“နေပါအုံး နောင်ကြီး ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက ဘာပြောသွားလို့လဲ ပြောပါအုံးဗျ´´
“ဒီလိုကွာ ငါက တစ်ရာ နှစ်ရာ သုံးရာ လေးရာ အဲလိုရေတွက်ပြီးတော့ ခြောက်ရာလို့ ငါ့ နဲ့အတူ သောက်နေ တဲ့ ဘော်ဒါကို ပြောလိုက်တယ် အဲဒါကို ခင်ဗျမိတ်ဆွေက မြေပဲပြုတ်ထွက်ဝယ်ရင်း လေးရာပြီးတော့ ငါးရာ ဖြစ်ရမှာ ခြောက်ရာဟုတ်ဘူးလို့ ဆရာလာလုပ်သွားတာ အဲဒါရှင်းမလို့´´
“နောင်ကြီးကလဲ ဟုတ်တယ်လေ တစ်ရာ နှစ်ရာ သုံးရာ လေးရာ ပြီးရင် ငါးရာ ပေါ့´´
“မဟုတ်ဘူး တစ်ရာ နှစ်ရာ သုံးရာ လေးရာ ပြီးရင် ခြောက်ရာ ဗျ ခင်ဗျတို့ ဘာသိလို့လဲ ခင်ဗျတို့နဲ့ အဲဒီကိစ္စ အခု ရှင်းမှဖြစ်မှာ´´
“နောင်ကြီးက ရှင်းချင်တယ်ဆိုလည်း အေးဆေးရှင်းရတာပေါ့ နေပါအုံး ဖြစ်တာက ဘယ်လို´´
အဲဒီတော့မှ ခုနငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ လေးရာပြီး ငါးရာလို့ ပြောသွားတဲ့သူက ၀င်ပြီးတော့
“မိတ်ဆွေတို့ကလည်း ရှင်းခန်းကို မရောက်တော့ဘူး ကျွန်တော်က တစ်ရာ နှစ်ရာ သုံးရာ လေးရာ ငါးရာ ခြောက်ရာ ခုနှစ်ရာ ရှစ်ရာ စသည်ဖြင့် သီအိုရီအရ အဲလိုဘဲ ရေတွက်ကြလို့ လေးရာ ပြီးရင် ငါးရာ လို့ပြောတာ နောင်ကြီးက လေးရာပြီး ခြောက်ရာ ဘာလို့ရေတွက်တာလဲ ဆိုပါအုံး´´
“အဲဒါကို ရှင်းမလို့ဘဲလေ ငါက မနက်အိမ်ကထွက်တော့ အိမ်နားက ကွမ်းယာဆိုင်မှာ ကွမ်းတစ်ရာဖိုး ၀ယ်တယ်၊ ပြီးတော့ အလုပ်ကို ဆိုင်ကယ်မောင်းသွားရင်း လမ်းမှာစားသွားတော့ ကွမ်းကကုန်သွားလို့ အလုပ် ရောက်တော့ နောက်တစ်ရာဖိုးဝယ်တယ် ပြီးတော့ နေ့လည်ထမင်းစားနားတော့ နောက်တစ်ရာဖိုးဝယ်တယ်၊ အဲ ညနေ လဘက်ရည်သောက်နားတော့ တစ်ရားဖိုးထပ်ဝယ်တယ် ပြီးတော့ အလုပ်ဆင်းဘော်ဒါတွေနဲ့ ဘီယာ ဆိုင်ဝင်မှာမို့ နှစ်ရာဖိုးဝယ်တယ် အဲဒီ ဒီနေ့ကွမ်းဖိုးကို ငါ့ ဘော်ဒါကို တွက်ပြတော့ တစ်ရာ နှစ်ရာ သုံးရာ လေးရာ ပြီးတော့ကွမ်းနှစ်ရာဖိုးဝယ်တာမို့ ခြောက်ရာ ဆိုပြီး ရေတွက်တာပြောတာလေ အဲဒါကြောင့် ငါတွက်တာမမှားဘူးလို့ မင်းတို့ကိုရှင်းချင်တာ´´
သူတို့တွေအပြန်အလှန်ပြောတာကို နားထောင်ကာကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော်တော့ သောက်လက်စ ဘီယာ တောင်ထပ်သောက် စရာမလိုအောင် အတော်ကိုချာလပတ်ရမ်း မူးသွားတာဘဲဗျာ။ စာဖတ်သူတို့ကတော့ မမူးလောက်ပါဘူးနော်။
( တွေ့ကြုံလာရ ဘုံဘ၀မှာဖြင့် …………. )
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့… ရုံးချိန်ကြီး မသောက်ပဲ မူးသွားတယ်… ဟီး ဟီး
စကားပြော ဝတ္ထု လေးတွေကို ဖတ်နေကျ ဖြစ်သွားတော့
မမူးပါဘူး ဖျတ်ကနဲဖတ်လိုက်ရင်း ကိုခကြီး စာတွေထပ်နေပြီလို့ထင်မိတာ။
၁ယာ..၂ယာ..၃ယာ..၄ယာ..၆ယာ… အဲ.. ၆ရာစားတဲ့သူကိုပြောလိုက်ပါ…
Posted by ဆူး on Oct 20, 2010 i
သဂျီးရေ မန်းမှာတွေ့ရတဲ့သူ ယောက်ျားအတော်များများ ကွမ်းစားတတ်ပြီး၊ တစ်ချို့ဆို တစ်နေ့တစ်နေ့ စားနှုန်းက အံသြလောက်တယ်ဗျ ကွမ်းဖိုးတင် ထောင်ဂဏန်း ငွေရှိတယ်။
ကျန်းမာရေးအရ ကောင်းတဲ့အလေ့အထမဟုတ်ဘူး ပြောပင်ပြောသောငြား ဆိုသလိုပါဘဲဗျာ။
အဲဒီ နံပါတ်နောက်က စာတွေကို အကုန်ဖျက်ပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါနော်
သိကြားမင်း သုံးခါ ပြန်ဖတ်လိုက်ရတယ်
သြော်………စကားထပ်တာပါလား လို့ သိတာ
နည်းနည်း တောင်မူးချင်သွားတယ်… ကိုခ ရေ…..။ ကျွန်တော်လည်း ပြန်တွက်ကြည့်ဦးမှ…ပဲ..။
အမလေး သမဂ္ဂဆရာတောင်မူးချင်တယ်ဆိုတော့ ခင်ခတော့ မှောက်ပြီပေါ့ဗျာ အဲဒီနေ့က လိုက်နားထောင်ရင်း သောက်ထားတာထက်ပိုမူးသွားသဗျ ကိုအာဂ ရေ
လေးရာပီး ခြောက်ရာလို့ ရေဒဲ့လူဂ ..
ခင်ညားဘဲ ဖစ်မှာ ….
ဟုတ်ဒယ် မီဟုတ်လား ဥခင်ခဂျီးးးးးးး
(လူဇိုးး မသောက်ဘဲ မူးအောင် လုပ်သွားဒယ် .. ဂယ်ဗျဲစ်)
ကိုအံစာတုံးရေ ဟုတ်ရပါဘူး ကျုပ်ကကွမ်းမစားဘူးဗျ
ခီညား မဟုတ်ရင် …
ဖေပေါက်ဂျီး ဘဲ ဖစ်မှာ …